लकडाउन लम्बिदै गएपछि बैंकहरूले ग्राहकलाई गरे यस्तो आग्रह, हेर्नुहाेस के भने ? — Imandarmedia.com
लकडाउन लम्बिदै गएपछि बैंकहरूले ग्राहकलाई गरे यस्तो आग्रह, हेर्नुहाेस के भने ?
काठमाडौँ । आफ्नो खाता, एटीएम पिन नम्बरलगायत व्यक्तिगत विवरण कसैलाई नदिई सुरक्षित किसिमले मात्र बैंकिङ कारोबार गर्न बैंकहरूले आग्रह गरेका छन् । लकडाउनका बेला घरैबाट विद्युतीय कारोबार गर्न ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिरहेका बैंकहरूले बैंकिङ सुरक्षामा पनि ध्यान दिन भनेका हुन् ।